Ady Epika: fiandrianana – mangalatra&Hack – Torohevitra Android Cheats
Ady Epika: fiandrianana – mangalatra&Hack
ny admin | Oktobra 22, 2021
Milalao ho tompo ao amin'ny Fanjakana Telo ary tariho ny tafikao handresy ny tany mikorontana. Amboary ny tanànanao, teknolojia fikarohana, ary manitatra faritany mba hanamafisana ny famokarana loharanon-karena. Ampio ny jeneraly mahatoky anao amin'ny fahaiza-manao tsara indrindra ary miady amin'ny mpilalao an'arivony hafa an-tserasera amin'ny fotoana tena izy! Afaka miditra amin'ny firaisankina ianao mba hitombo sy handresy miaraka amin'ny namanao, fa raha tsy izany dia mety ho lasa mpiambina mandroba izao tontolo izao toy ny amboadia irery ianao. Nataon'ny Unreal Engine 4, Ady Epika: Ny Thrones dia mitondra traikefa amin'ny PC amin'ny finday. Hiaina ny tontolo iainana sy ny toetrandro, ary ampiharo amin'ny paikadinao. didy, handresy, ary mitaky ny seza fiandrianana!
**Vanim-potoana 4 Endri-javatra vaovao**
Ny tarana-mpanjaka dia eo an-tsisin'ny faharavana, ary mikorontana izao tontolo izao. Hifidy ny ho mpamonjy ny tarana-mpanjaka ve ianao, na ho revolisionista ka hanorina empira vaovao?
– 8 Jeneraly vaovao
– 2 Manohitra ny hery lehibe, Mifidiana iray hidirana
【Adin'ny mpilalao an-jatony】
Miaraha miady amin'ny tena fotoana miaraka amin'ny mpilalao an-jatony, zava-dehibe ny fanapahan-kevitra rehetra raisinao! Fanafihana feno na fanafihana an-tsokosoko? Mifanaraka na fahavalo? Fidio tsara ny paikadinao. Raiso ny seranana sy ny pass mba hanamafisana ny toeranao, miady amin'ny tambajotra loharanon-karena hanamafisana ny famokaranao. Mitantana ny ady toy ny tena komandy.
【Natsangana indray ny tontolon’ny Fanjakana Telo】
Mandehana amin'ny fandresena izay nitranga arivo taona lasa izay, ao amin'ny tantara fanta-daza momba ny Fanjakana Telo. Jereo ny fifandonan'ny mpiady, tetika avy amin'ny Art of War izay ampiharina, sy ny jeneraly angano mifanandrina. Ho vitanao ve ny ho tafavoaka velona amin'ity tany mikorontana ity ary amin'ny farany dia hitaky ny seza fiandrianana?
【Jeneraly angano amin'ny baikonao】
Antsoy ireo jeneraly angano ao amin'ny Fanjakana Telo mba hanatevin-daharana ny tanjonao! Aoka izy ireo no jeneraly mahatahotra Guan Yu, na ilay marshal mahatoky Jiang Wei izay niezaka niaro ny fanjakany hatramin'ny farany. Samy manana fahaiza-manao manokana sy karazana miaramila, ampiasao izy ireo hananganana legionao matanjaka! Ny jeneraly rehetra dia modely amin'ny antsipiriany amin'ny lalao, velomina avy amin'ny tantara taloha izy ireo ary miandry ny didinao!
【Firaisankina, fifampiandaniana, sy rangers】
Mpilalao ekipa ve ianao sa amboadia irery? Amin'ny maha mpilalao alliance azy, afaka miady amin'ny namanao ianao, mandresy fahavalo mahery miaraka ary mifanampy mba hitombo. Raha tsy izany, ianao dia afaka ny ho mpiambina mangina sy mahay mandanjalanja, amboadia irery mandroba ny sahan'ady ary tena mpiremby. Anjaranao ny misafidy izay tianao hahatongavana.
【Tontolo tena zava-misy misy terrain sy toetrandro samihafa】
Tsidiho ny sarintany goavambe miaraka amin'ny mihoatra 4 tapitrisa taila, mandehana mitety tendrombohitra ny miaramilanao, renirano, efitra, ALA, ary tany mangatsiaka. Ny rafitra toetr'andro maneran-tany dia hisy fiantraikany amin'ny tafikao, jeneraly, ary ny fahombiazan'ny ady amin'ny ankapobeny. Ampiasao ny terrain sy ny toetrandro ho tombontsoanao, ary afaka mandresy ireo fahavalo izay toa tsy azo kitihana indray mandeha ianao.
【Paikady azo atao tsy misy fetra】
Fahaizana ankapobeny an-jatony, 4 karazana miaramila miaraka amin'ny 28 variants, 6 fananganana ady samihafa, ary paikady isan-karazany izay afaka mampiasa toetrandro hanamafisana ny tafikao. Manana paikady tsy misy fetra azonao isafidianana, ampiasao tsara ireo ary porofoy ny fahendrenao!
**Mahazoa fampahalalana bebe kokoa momba ny Epic War: seza fiandrianana**
Facebook: ny https://www.facebook.com/EpicwarthronesSEA
Tranonkala ofisialy: Sokajy://www.archosaur.com/epicwarthrones/
ady: ny https://discord.gg/zujkyBnMwW
Version rafitra: Android 5.0 na ambony
ram: 2GB na mihoatra
Unité centrale: Qualcomm Snapdragon 660 na avo kokoa
Sokajy: Cheats sy Hack na toro-hevitra Tags: CheatsHack, Epic, fiandrianana, War
← SpiritBoom – mangalatra&Hack Squid Challenge: Lalao Survival – mangalatra&Hack →